Banyere Anyị - Xingtai Huimao Trading Co., Ltd.
Na soplaya na akpaaka mapụtara Parts
Xingtai HUIMAO erekwa CO., LTD mepụtara si roba akụkụ dealer ka iche iche akụkụ soplaya, ekspootu. Anyị n'ọnụ bụ nnọọ asọmpi
1.Over 20 afọ nke n'ichepụta na exporting ahụmahụ
2.professional akpaaka akụkụ ahụ mapụtara soplaya
3.A dịgasị iche iche nke akụkụ akpaaka maka nhọrọ
4.Sufficient n'ichepụta, elu na ngwá na ọkachamara mkpara
5.Small ukwu iji na ibu iji ibu ma dị
6.Fast nnyefe, ozugbo omume, High quality.All akpaaka akụkụ ahụ mapụtara na-mere ọkachamara factory mmekọ na elu n'ichepụta equipments.
Ka ọ dị ugbu a ndị injinia anyị, ndị ọrụ nwere ọgụgụ isi, njikwa sayensị nwere ike hụ na ngwaahịa dị oke mma, ọkachamara na ndị nwere ọgaranya na-ebupụ ahịa na-enwe ike ijikwa n'aka na usoro azụmaahịa niile dị oke mma.
Anyị ozi: Ogo mbụ ọrụ mbụ Ebe E Si Nweta Anyị tumadi na-emepụta roba akụkụ (mmanụ akara, o mgbanaka, valvụ cover gasket, ohia ogwe aka), engine ugwu, ikuku nyo, mmanụ iyo, mmanụ nyo, ebua plọg, breeki mpe mpe akwa, breeki akpụkpọ ụkwụ, ujo absorber na ndị ọzọ na akpaaka akụkụ na ihe karịrị 50 iche iche N'ihi na Car Cardị Toyota Honda Nissan BMW VW Audi Mitsubishi Benz KIA Mazda Lexus Great Wall Pickup SUZUKI ISUZU Subaru Hyundai Volvo ... Ọrụ anyị A.
Gịnị bụ thekwụ termsgwọ okwu 1 n'ebe ọdịda anyanwụ n'otu 2 T / T B. Gịnị bụ anyị mbupu usoro
1 Express dị ka DHL UPS TNT Fedex (akaụntụ ndị ahịa nwere ekele). Ọ na-ewe ụbọchị 3/4 iji ruo ebe njedebe.
2 Mbupu site n'ikuku. Ọ na-ewe 4/6 ụbọchị iji ruo ebe.
3 Mbupu na oké osimiri. (Mpempe akwụkwọ zuru ezu ma ọ bụ mbupu mbupu).
Anyị nwere ike ịhazi mbupu na nnabata omenala ma ọ bụrụ na ịchọrọ, anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ na ndị ọrụ ụgbọ mmiri na-enye ọrụ zuru oke na ọnụ ahịa asọmpi Naanị ịkwesịrị iburu ngwongwo n'ụlọ ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ mmiri mpaghara gị. C.
Kedu ọnụahịa ọnụahịa na oge nnyefe 1 Ahịa Ahịa Ahịa (50 PCS n'okpuru) 3-5 ụbọchị nnyefe oge 2 Ọnụahịa zuru ezu (50-499 PCS) 3-5 ụbọchị nnyefe oge 3 Nkume ego iji (500 PCS n'elu) 25-35 ụbọchị nnyefe oge D. Ndị ọzọ Anyị ga-enwe ekele dị ukwuu ma ọ bụrụ na onye ahịa nwere ike ịnye ọnụọgụ OEM, ụdị ụgbọ ala na ịhazi ọtụtụ. N'ihi ya, anyị nwere ike na-enye ndị kasị mma e kwuru maka ndị ahịa. Site na-aga n'ihu ọhụrụ nke ngwaahịa na teknụzụ na integrated arụmọrụ nke ulo oru yinye, anyị na-ezute na-eji ọkụ 'chọrọ na ihe niile na-gburugburu ụzọ, na-aghọ ndị na-eduga ụwa na-eweta nke n'ozuzu n'èzí ígwè ngwọta na ya ika. Anyị ga-emepụta ọdịnihu dị mma na ndị ahịa n'ụlọ na mba ọzọ!
Ihe nlele, OEM / ODM nhazi
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị site na email ma ọ bụ ekwentị ma anyị ga-alaghachikwute gị ozugbo enwere ike. Anyị na-ele anya ịnụ olu gị.
Akụkụ mapụtara, Auto ngwa, Mmanu mmanu, Control Ogwe aka Bushing, Akara Nkebi, Silicone Rubber Akara,